कडै कडा! “Dear श्रीमान”, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस – PathivaraOnline
Home > रोचक > कडै कडा! “Dear श्रीमान”, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस
कडै कडा! “Dear श्रीमान”, एकपटक अवश्य पढ्नुहोस
admin December 1, 2020 December 1, 2020 रोचक	0
म तपाइँलाई मेरो लागि जु’नतारा टि’पेर ल्याइदिनु भन्दिन ,तर जब बाहिरबाट घर आउनुहुन्छ, साथमा एक मुस्कान लिएर आउनुहोस्… ।म भन्दिन, कि सबैभन्दा बढी मा’या मलाई नै गर्नुहोस् ,तर एक नजर मायाले त हेर्नुहोस म भन्दिन , कि बाहिर खुवाउन लिएर जा’नुहोस् तर एकपटक साथमा सँगै बसेर त खाने गर्नुहोस् …। भन्दिन कि मलाई काम गर्नमा सघा’उनुहोस् ,तर कति काम गर्छु, हेर्ने त गर्नुहोस् … ।भन्दिन म मेरो हात पक्डिएर हिड्नुहोस् ।
तर कहिले दुई कदम साथ त हिड्ने गर्नुहोस् … । यसरी नै बित्नेभयो जिन्दगिको यात्रा भाग्दा भाग्दै ,एकछिन थकाई मार्न त बस्ने गर्नुहोस्। भन्दिन कि मलाई अनेकौ नामले बोलाउनुहोस् ,।एक पटक फुर्सदमा “सुन”… मात्र भ’एपनि त भन्ने गर्नुहोस् …।भन्दिन तपाइँलाई जुन-तारा टिपेर ल्याइदिनुस तर जब घर आउनुहुन्छ , एक मुस्कान साथमा ल्याउने गर्नुहोस् ।आखिर श्रीमानको लागि श्रीमती किन आवश्यक छ? ( बिश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् )
१, जब तपाईं दुखी हुनुहुन्छ त्य’सबेला उनले तपाइँलाई कहिल्यै एक्लो छाड्ने छैनन् । २, हरेक समय, हरेक दिन तपाइँलाई तपाईं भित्रको खराब बानी छोड्नको लागि भन्नेछिन। ३, हरेक सानो-सानो कुरामा तपाईं सँग झगडा गर्छिन तरपनी धेरै समयसम्म रिसाएर बस्दिनन ।
४, तपाइँलाई आर्थिक मज’बुत बनाउछिन ।५, जिबनमा केहिपनी राम्रो चलिराको छैन , तर पनि तपाइँलाई यही भन्छिन चिन्ता नगर्नुस् सब ठिक हुन्छ । ६, तपाइँलाई समयको महत्त्व बुझाउने छिन ।७, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि दिनमा १५ पटक फ़ोन गरेर हालखबर सोध्छिन । कहिलेकाही तपाईं रिसाउनुहुन्छ , तर सत्य यो हो कि तपाईं केहि गर्न स’क्नुहुन्न ।
८, किनकि श्रीमती ईश्वरको विशेष उपहार हो त्यसैले यसको उपयोगिता जान्नुहोस र उनको ख्याल राख्नुहोस। ९, यो सन्देश हरेक बिबाहित पुरुषको मोबाइलमा हुनुपर्छ ,ताकि उनिहरुलाई आफ्नो श्रीमतीको महत्त्व थाहा होस् । १०, अन्तमा हामी श्रीमान श्री’मती नै हुनेछौं ।११, भलै रिसाउने झ’गडा गर्ने गरौं एक दोस्रोमा मन टुक्रीयोस , एक आपसमा दादागिरी गर्नको लागि अन्त्यमा हामी दुई नै हुनेछौं ।
१२, जे भन्न मन लाग्छ त्यो भन , जे मन लाग्छ त्यो गर , एक दोस्रोको लागि चस्मा र दाउरा खोज्नको ला’गि अन्त्यमा हामी दुई हुनेछौँ । १३, यदि म रिसाए भने , तिमी मलाई फ़काउनु ,तिमि रिसाउछौ भने म फ़काउछु , एक अर्कामा परिपुरक हुन अन्त्यमा हामी दुई नै हुनेछौं ।
१४, जब आँखा धमि’लो हुन्छ , जब स्मरणशक्ति कमजोर हुनेछ, त्यसपछि एक अर्कालाई खोज्नको लागि अन्त्यमा हामी दुई नै हुनेछौं। १५, जब घुँडा दुख्न थाल्छ ,कम्मर पनि झुक्न छा’ड्छ , अनि एक अर्काको खुट्टाको नङ काट्नको लागि अन्त्यमा हामी दुई नै हुनेछौं ।
१६, हे, मलाई केही भएको छैन,बिल्कुलै स्वा’स्थ्य छु , यस्तै भन्दै एक दोस्रो लाई भ्रममा पार्नको लागि अन्त्यमा हामी दुई नै हुन्छौं । १७, जब साथ छुट्छ ,बिदाइको समय जब आउँछ , तब एक दोस्रो लाई माफ गर्नको लागि अन्त्यमा हामी दुई नै हुनेछौं ।<
चर्चित टिकटक कलाकार निशा गुरागाईले रमाइलोको लागि बनाएको भाइरल भएपछि गरिन् यस्तो
टिकटकमा भा’ईरल हुन यी युवतीको यस्तो च’तिर्कला हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
यी युवतीको बिहे कुकुरसँग गरेपछि, कारण सुनेपछि प्रहरी नै चकित!